MAHAJANGA : Voasembantsembana ny famatsiana jiro sy rano tato ho ato
Samy tsy dia misosa daholo ny famatsiana jiro na rano eto Mahajanga. Tato ho ato dia niverimberina indray ny fahatapatapahan’ny jiro eto Mahajanga. 25 octobre 2019
Tapaka dia miverina indray, dia tapaka afaka 5mn, dia miverina dia toy izany hatrany. Eo anelanelan’ny 1mn ka hatramin’ny 30 mn eo ny fahatapahana amin’ny antoandro. Manimba fitaovana mandeha amin’ny herinaratra izany, indrindra ho an’ny olona tsy mipetraka an-trano, nefa ny Jirama dia tsy manonitra ny simba, toy ny taloha intsony. Ny alina kosa dia delestazy ka ny 8 oktobra teo dia nandefa fampandrenesana ny Jirama fa noho ny olana teo amin’ny milina lehibe miisa roa dia hisy ny delestazy eo amin’ny 2megawatts eo ka ho tapaka manomboka amin’ny enina ora hariva ka hatramin’ny valo ora sy sasany hariva ny jiro amin’ny fokontany sasany.
Ny alarobia teo kosa dia voalaza fa mbola nisy olana ihany koa ny milina iray ka nisy ny delestazy 1,5megawatts, amin’ny hariva. Nilaza moa ny talen’ny Jirama fa io alarobia io ihany ny delestazy.
Ankoatra izany dia betsaka ny fokontany eto Mahajanga no mijaly rano. Saika ny fokontany rehetra mihitsy aza, fa misy ny manana olana famatsiana amin’ny alina ary misy koa ny tsy misy rano mandeha amin’ny alina. Ny alina no mba misy rano mandeha amin’ny fokontany maro ary zara raha misy adiny roa izany, indrindra ho an’ny fokontany toa an’ Ambondrona, Tsararano ambony, Antanimalandy. Noho izany dia filaharam-be amin’ireny paompy natao ho an’ny daholobe ireny. Ireo manana paompy an-trano kosa dia amin’ny alina no mitaty ny rano ampiasaina andro sy alina. Anisany mijaly rano ny mponina amin’ny fandalovan’ny fantsona avy any Andranotakatra iny.
Voalaza moa fa tsy maharaka ny filan’i Mahajanga intsony ny rano voapaompin’ireo “station de pompage” misy eto Mahajanga, na noho ny tsy fahampian’ny rano, na noho ny fahasimban’ny milina. Efa misy moa ny fanamboarana ireo milina mpampiakatra rano sy fanafarana milina hafa hanampy ny efa miasa ao. Misy ihany koa fanamboarana siniben-drano vaovao sy fanadiovana rano izay nambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ny fandalovany farany teto. Nambarany fa anisany hahazo tombony amin’izany ny fokontany Amborovy izay mijaly rano hatramin’izay, ka hatramin’izao. Isan-taona dia tsy maintsy miverina foana ny olana famatsian-drano sy jiro eto Madagasikara hatramin’ny taona 2004 niantombohan’izany.
Mbola tsy nisy Filoham-pirenena tamin’ireo telo farany afaka namaha ny olana. Anisany tafiditra ao anatin’ny veliranon’ny Filoha Rajoelina anefa izany ka antenaina ny vahaolana mahomby amin’ny famatsian-drano fisotro madio ho an’ny rehetra.